Aakar February 04, 2010
अस्ति सङ्घीयता विरोधी उपत्यका बन्द पनि सफल पारियो जसरी पहिले सङ्घको र्समर्थन गर्ने बन्दलाई पारिएको थियो, घरै बसेर ।
देश टुक्र्याउन पाइँदैन भन्छन्, कुरा सुन्दा ठीक लाग्छ । उता सबै क्षेत्र र जातिलाई समान अधिकार चाहिन्छ भन्छन् । त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ । टुक्र्याउन पनि भएन तर हामीलाई सङ्घीय नभई पनि नहुने भएको छ । अहिले हामीलाई चाहिएको छ सर्प मर्ने, लौरो नभाँचिने उपाय । अब गर्ने के त ? राजनीतिशास्त्रका धुरन्धर पण्डित कृष्ण खनाल लेख्छन् संसारमा अहिले नै २४ वटा सङ्घीय राष्ट्र छन् रे र नेपाल पनि सङ्घीय भयो भने पच्चीसौं राष्ट्र हुन्छ रे ।
उसो भए सङ्घीय हुने नेपाल पहिलो राष्ट्र नहुने रहेछ । हामीभन्दा अघि नै सङ्घीय भइसकेका मुलुकहरू र्सवत्र रहेछन् । यसो विचार्दा सबभन्दा राम्रो उपाय त नेपाललाई र्सलक्कै अहिले भइराखेकै कुनै सङ्घीय राष्ट्रमा सामेल गराउनु पो हुन्छ कि ? त्यसो गर्न पाए हाम्रो रहर पनि पूरा हुने थियो र देश टुक्रिने डर पनि नरहने थियो ।
कुन सङ्घमा सामेल हुने त्यो हाम्रो तजबिज र खुसीको कुरा । अफ्रिकामा पनि दुई-चार सङ्घीय राष्ट्रहरू रहेछन् । ल्याटिन अमेरिकामै पनि दुई-तीनवटा देश सङ्घीय भनेर चिनिँदा रहेछन् । क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिका नै सङ्घीय रहेछन् । युरोपतिर हेर्ने हो भने नाम चलेका जर्मनी र स्विट्जरल्यान्डबाहेक अष्ट्रिया, बेल्जियम इत्यादि पनि सङ्घीय राष्ट्रहरू रहेछन् । रसिया सङ्घीय रहेछ । अरब सागरछेउको संयुक्त अरब इमिरेट्स पनि सङ्घीय रहेछ । उता अष्ट्रेलिया समेत सङ्घीय भनिँदो रहेछ । हामीसित टाँसिएको भारत नै ठूलो सङ्घ रहेछ ।
यतिका विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै हामी आफैंले सङ्घ खडा गरिरहनुको कुनै तुक छैन । सङ्घमा भौगोलिक दूरी र सामीप्यले पनि कुनै अर्थ राख्दैन । अलास्का र हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिकाको सङ्घभित्र पर्छ भने नेपाल पनि जुनसुकै सङ्घभित्र पर्न सक्छ । त्यसैले कुन सङ्घमा सामेल हुने हो त्यो रोजेर स्वाट्ट प्रस्ताव गर्ने ।
यस्तो सङ्घको प्रस्ताव गरे कसो होला ?
[नेपाल का गनिएका व्यंग्यकार मा गनिने ऋतुराज को ऋतुविचारलाई, माघ महिना को हिमाल खबरपत्रिका बाट हामीले साभार गरेर यहाँ राखेका छौँ ।]
img credit: neilsnepal.wordpress.com
Anonymous February 4, 2010 at 6:00 AM
जे पायो तेहि... यसो गर्न पाईदैन
Chaitanya February 4, 2010 at 7:09 PM
यो गर्नै नमिल्ने कुरो , कसो हुने कुरै भएन, नकसो हुन्छ | पढेर हाँस्न भने मज्जैले होला |
prelude February 5, 2010 at 10:22 PM
Bhairaheko nai yehi nai ta ho...aliali laathi, pradharshan, julus le nai ta ho farak banayeko...hoina ra?
S February 6, 2010 at 1:31 PM
Don't understand why the politicians are doing this...We all are confused about what we actually want....
S November 12, 2010 at 4:12 AM
Milan November 12, 2010 at 4:12 AM